Uvele enkantolo oshise umfana nge-ayina
Durban - Usale emabhadubhadu emzimbeni umfana oneminyaka engu-15 waseZimangweni, eNanda, othi ushiswe ngunina ongamzali nge-ayina ngeSonto ngoba emsola ngokuba wuhlupho ekhaya, kubika iphephandaba iSolezwe.
Lo mfana ongeke adalulwe igama lakhe ngenxa yeminyaka yakhe yobudala, ushe esiswini, emhlane, emathangeni, ebusweni kanti ezandleni zombili unomaka wentambo akade eboshwe ngayo ngesikhathi eshiswa.
UCaptain Thulani Zwane wamaphoyisa KwaZulu-Natal uthe lo wesifazane uboshiwe ngecala lokuzama ukubulala kanti uzovela eNkantolo yaseNtuzuma maduze.
Uma elandisa lo mfana uthi unina ufike kwamngani wakhe eBhambayi ehamba nomfowabo ngoba efuna i-ayina lakhe abelithathile.
"Umama uthe angihambe ngiyomkhombisa lapho ngiliyise khona.
"Ngihambile nabo ngafike ngalithatha i-ayina ngabanika, sagoduka siya ekhaya. Kuthe uma sifika ekhaya umama wangifaka ekamelweni wangibopha izandla nezinyawo ngentambo okuboshwa ngayo imbuzi," kuchaza lo mfana.
"Ube eseqala engishisa la esiswini ngoba bengilele ngomhlane. Bengithi uma ngikhala athi angithule ngimbangela isicefe. Ube esengiphendula wangishisa emhlane nasemathangeni nala ngaphambili," kuchaza lo mfana.
Kuthiwa lo mfana usolwa ngokuhlupha ngokweba ekhaya.